Crusher abaza kuzisebenzisa, Crusher Liner, isityumzi Isirinji Plate - Shengde
ipleyiti yelinen enxibayo
Super banxibe enganyangekiyo acces zentsimbi manganese eliphezulu ...
Sand dredger chain ipleyiti isityumzi izincedisi cr ...
Cone isityumzi banxibe isahlulo kaludaka udonga lothuli c ...
Yasekwa ngonyaka we-1970, u-Shuangfeng Shengde unxiba izinto ezinganyangekiyo kwi-Co, Ltd ngumenzi wobuchwephesha bezinto ezahlukeneyo ezinokuthwala imanganese. Ezifana umhlathi isityumzi ipleyiti, cone isityumzi banxibe inxenye, ifuthe isityumzi isinxibo banxibe inxalenye, isando isityumzi banxibe inxenye.
Ifunyanwa e Shuangfeng, Hunan, Shengde ithatha indawo ka-9000 square metres, kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-200 kuquka abasebenzi abangaphezulu kwama-20 yobungcali kunye nezobugcisa…
Yintoni umatshini wokugoqa umatshini wokugoba?
Sibamkela ngokufudumeleyo abantu ababona kude ekhaya nakumazwe aphesheya ngentsebenziswano kunye nokuphumelela.
Inkqubo yokuvelisa isanti kunye negrabile
Isanti kunye nelayini yokuvelisa ilitye ngumjikelezo wemveliso ejikelezayo edibanisa umgca wemveliso yesanti kunye nelayini yokuvelisa ilitye, enokuvelisa isanti kunye nelitye ngexesha elinye. Iseti epheleleyo yokuxhobisa ...
Iikhrayitheriya zoyilo kunye nokukhethwa kwezixhobo ...
1. Uyilo loYilo loqhekeza umgca wokwenza isanti Uyilo lweskim ikakhulu lubandakanya amanqanaba amathathu: uyilo lwenkqubo, uyilo loyilo lwenqwelomoya kunye noyilo lwezixhobo. 1.1 Inkqubo yoyilo Phantsi k ...